Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
November 15, 2021 November 9, 2021 by Jọshụa James
Tinye ebe nchekwa anaghị akwụsi ike
Wụnye ma ọ bụ kwalite Linux Kernel 5.15
Usoro nkwalite (A kwadoro)
Biputere nwụnye ma ọ bụ nkwalite
Nhọrọ - Wụnye XanMod Linux Kernel 5.15
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Linux Kernel 5.15 kacha ọhụrụ na Debian 11 Bullseye jiri ya Ebe nchekwa nnwale Debian nwere pinning APT. Ka oge na-aga, ejighị n'aka (sid) na ule (bookworm) ga-enweta kernel 5.15, dị ka 5.14 gara aga mekwara.
A ga-emelite nkuzi a iji gosipụta mgbanwe mgbe mgbanwe a nke ebe nchekwa ga-eme.
Maka sistemụ arụmọrụ Debian 11 nke na-emepụta ma ọ bụ na-eje ozi dị ka kọmpụta desktọpụ dị mkpa, ejila kernel 5.15 sitere na ebe nchekwa a ma ọ bụ nke ị nwere ike iji aka budata ruo mgbe opekempe ruru ngalaba nnwale (Debian Bookworm) ị na-achọsi ike ịnwale. .
Ịwụnye ma ọ bụ kwalite na kernel a nwere ike, dị ka ngwungwu ọ bụla na-adịghị akwụsi ike, bụrụ ihe a na-atụghị anya ya n'ihe gbasara ịrụ ọrụ na nchekwa ma mee ka mfu data nke enweghị ike nwetaghachi.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibubata alaka nnwale. Maka ugbu a, nke a bụ naanị ụzọ iji wụnye Linux Kernel 5.15. Dị ka akọwara na mmalite nke nkuzi ahụ, ọ ga-emecha gaa na ngalaba na-adịghị akwụ ụgwọ / ule n'ime izu ole na ole na-esote ọnwa.
Ụzọ kachasị mfe bụ imepe ọnụ ọnụ gị wee detuo na mado iwu nkwughachi a ka ịgbakwunye ebe nchekwa achọrọ.
Iji gosi na agbakwunyere nke a, ị nwere ike ịmekwu nzọụkwụ wee nyochaa site na imepe ya /etc/apt/sources.list faịlụ.
Ọmụmaatụ nke mbubata ebe nchekwa na-aga nke ọma:
Iji pụọ, jiri ya (CTRL+X) Ngwakọta ahụigodo.
Melite ebe nchekwa gị dabara ka ọ gosipụta mgbakwunye ọhụrụ.
Site na ebe nchekwa ọhụrụ agbakwunyere, ị nwere ike ịmalite ịwụnye Linux Kernel 5.15.
Mee iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Nhọrọ kacha mma bụ iji APT pinning ka iwu mmelite ọkọlọtọ ga-elele ebe nchekwa nnwale maka linux-img-amd mbụ ngwugwu ka ị na-edobe ngwungwu Debian 11 ndị ọzọ na ebe nchekwa dị. Nke a na-achọpụta mgbe mmelite ọ bụla pụta, ị ga-enweta ha ngwa ngwa.
Na-esote, ị ga-ahụ mmelite dị maka Linux kernel, malite nhazi.
Ozugbo emechara, malitegharịa sistemụ gị maka kernel 5.15 ọhụrụ ka ọ rụọ ọrụ.
Dịka n'elu, etinyere kernel 5.15. Nhọrọ, ị nwere ike ịgba ọsọ iwu amụma apt-cache maka ozi ndị ọzọ:
Dị ka n'elu, ihe nrụpụta kernel dị na "5.15.1". A ga-ahụ mmelite ọhụrụ ọ bụla bịarutere na-akpaghị aka mgbe ị na-eme ya iwu mmelite dabara adaba ka ịlele maka mmelite maka ngwungwu nchekwa Debian 11 Bullseye ndị ọzọ.
Ụzọ ọzọ iji wụnye Linux Kernel 5.15 bụ ịwụnye kernel omenala XanMod. Nke a na-abịa n'ụdị ụtọ dị iche iche, yana n'oge nkuzi a mụ ịbụ 5.14 na ihu Alaka nwere kernel 5.15 kachasị ọhụrụ nke a na-ewere dị ka ọ kwụsiri ike.
XanMod nwekwara ngalaba mmepe nke 5.15, mana nkuzi a ga-egosi otu esi etinye kwụsiri ike ma ọ bụ ihu.
Nke mbụ, bubata ebe nchekwa maka XanMod.
Ọzọ, bubata igodo GPG.
Na-esote, melite ndepụta nchekwa APT gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ ahụ.
Jiri iwu a ka ịwụnye Linux Kernel kwụsiri ike, nke dị ugbu a na 5.14 mana ọ ga-agbanwe na 5.15 obere oge.
Ka ịwụnye kernel 5.15 kachasị ọhụrụ site na iji ebe nchekwa ihu, jiri iwu na-esonụ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ibi na nsọtụ na mmepụta ma wụnye ụdị mmepe nke 5.15 (anaghị akwado ya), jiri iwu na-esonụ.
Ozugbo ị banyere, nyochaa kernel arụnyere.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye kernel 5.15 kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Debian 11 gị site na iji isi iyi Debian ma ọ bụ XanMod. Rịba ama, ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị ugbu a na-ebufe nrụnye ọkọlọtọ maka nkwụsi ike kachasị.
Agbanyeghị, maka ndị na-achọ ịnwale kernel 5.15, ị nwere ike ịghaghachi azụ na kernel gara aga n'ụzọ dị mfe na menu buut, yabụ ịnwale ya abụghị echiche ọjọọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwetara ngwaike ọhụrụ nke anaghị akwado ya. Debian 11 kernel ndabara.
November 11, 2021 9: 50 elekere
Kedu ihe kpatara na ọ bụghị naanị tinye liquorix ma ọ bụ xanmod na ebe nchekwa (s).
Anọ m na-agba mmanya mmanya ihe karịrị otu ọnwa n'enweghị mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Zaa Marshall Neill
November 12, 2021 9: 18 am
Ọ dị mma ịnụ nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma maka gị, ama m na ndị a bụ nhọrọ dị mma maka kernels karịsịa maka ndị egwuregwu. Aga m emelite nkuzi ma tinye ha dịka nhọrọ nhọrọ.
Daalụ maka ntụnye ahụ, ọ kwesịrị m itinye ihe ndị a ugbu a na-eche banyere ya, ka ọ na-akawanye mma.
November 12, 2021 12: 53 elekere
Daalụ maka nzaghachi dị mma sitere na 'onye ode akwụkwọ n'ezie' dịka ọ na-adị ka ọ na-adịkarị oge ikwu/atụ aro na-abanye n'ọnụ okwu ojii.
Mkpụrụ ọzọ m jirila bụ kernel Xanmod.
November 13, 2021 11: 28 am
Enweghị nchekasị Marshall, agbalịrị m ịlaghachi na nkwupụta m niile. N'ezie, ọtụtụ dị egwu ma ị nwere ike ịmụta ntakịrị mgbe ụfọdụ.
Laghachi na nkuzi, m ga-emelite ya n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ na nhọrọ abụọ ahụ.
Ọzọ, daalụ maka nzaghachi na kernels ị jirila ma mara na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, enwere m ekele maka ya.
November 17, 2021 7: 33 am
A haziri nkuzi ndị ahụ, daalụ maka ntụnye ahụ ọzọ.
Ama m na ụfọdụ ndị ọzọ dị, mana ekwenyere m na ndị a kacha ewu ewu.